Akandiisa kunge hure ndokutanga kuyamwa chombo changu ndikatunda! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Akandiisa kunge hure ndokutanga kuyamwa chombo changu ndikatunda!
Ndakasangana naJanet about a year ago tese tisati taroora kana kuroorwa apa tainge tiri vangu vaida zvekusvirana zvakaipa.Tainge takambosvira panzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana kubva ndisati ndaroora and iye asati aroorwa up until now even ndakaroora.
Janet aiyita kuti ndinzwe kuda kusvira just nekuwona magaro ake akanaka eround and she was willing kuita zvinhu zvinyowani pabonde. Taiti kana tese takunzwa kuda bonde taingosanga somewhere tosvirana, mumwe musi takasangana ndine mukadzi wangu but takaita plan chete tikasvirana.
Janet akazoroorwa but pasina 6 months takasangana apa mukadzi wangu ainge ayenda out nebasa saka it was easy kuti tiwonane the next night ndokubva taita yedu yakudhara. Takasangana muparking ndokubva apinda mu BMW 7 series yangu, ndokubva tatanga kukisana zvakaita kuita kunge tichadamburana rurimi.
Janet akabva avhura bhurugwa rangu ndokutanga kuyamwa mboro yangu ko tine kwatakazoyenda here, ndakabvisa kajean kainge akapfeka ndokukandira uko. Ndakatanga kubata pant rake ndinzwe ratota kare ndokutanga kuribvisa iye achibva asimudzira magaro ake ainge ari round zvinonakidza.
Mboro yangu apa yainge yamira kuita kunge simbi, ndakangobata zimboro rangu ndokubva ndarinangisa pabeche rake rainge ratota kare. Ndakaipushira zvishoma ndikanzwa achemerera ndokubva asimudzira chiuno chake and nguva diki diki ndainge ndakunzwa kunge machende angu akurwadza apa ndichisvira harder and faster kusvikira ndatundira mukati mebeche rake apa yainge iri nyoro chaiyo.
Pandaisvira harder and faster munhu akanakirwa ndokubva atunda ka2 chaiko pandainge ndakuda kutunda futi zvikanzi aaah buritsa haungatundire mubeche rangu urikuda kuti ndiite nhumbu I am taking mapiritsi tirikuzama kuita mwana, usazame kutundira mubeche rangu futi. Ndakangonyarara handina kutaura kuti ndatundira mukati kare.
Six months ndakasangana naJanet nemurume wake apa ainge ane nhumbu ndokubva ndatovati makorokoto, ndikabvi ndati saka when are you due apa ndakabva ndatanga kuita calculate ndikangoti uyu mwana anogona kunge ariwangu. Since ainge nhumbu takaita meeting yedu again next week and ndainge ndakubvumirwa kutundira mukati, akandisvira kunge hure apa ainge aripamusoro achiita kukoira haaa masasi mukadzi anenhumbu anonaka.
Mwana akazvarwa apa ndainge ndakuyenda kuchikoro ndichiita Financial accounting saka ndakati ndichisvika muparking ndakawona pawindow remota pane paper rakanyorwa kuti ndine zemo risingaite, kana uchida kuyamwiwa mboro come to Room 319 pa Holiday Inn hotel.
Pandakawona kanoti aka ndakaziva kuti uyu ndi Janet chete ndokubva ndakutofarira kuti nhasi ndichasvirwa, ndakamhanya kumba ndokubva ndayenda kunogeza kuti ndizosvira ndakachena.Eight o’clock seemed to take forever ndiyo nguva yataisangana apa mabhora angu ainge akurwadza nekuda kusvira, ndakasvika 15 minutes early ndokubva ndanoka Janet akavhura door apa ainge akapfeka kanight kairatidza mazamu ake akamira kuti twiii apa beche rainge riri clean rakaveurwa ndakabva ndanzwa mboro yangu ichimira kuti twiiii.
Janet akakiya door ndokubva tasvirana zvemhando yepamusoro kusvikira tese tatundira ndipo pandikazomuudza kuti that day ndainge ndatundira mubeche rake and I was sure kuti mwana wake might be wangu zvikanzi ehe ndinozviziva kuti ndewako.
Akandiisa kunge hure
Previous articleAkasimudza gumbo mudenga apa chinhu chake chakazvimbirira nenyere!
Next articleNdakaita kupomba chinhu kusvikira ndakunzwa kuda kutunda!